Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) - Hello Sayarwon
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်)
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နေ့စေ့လစေ့မွေးဖွားသော ကလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် နေ့စေ့လစေ့လုဆဲဆဲမှာ မွေးဖွားသော ကလေးတွေမှာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေခံစားနေရပြီး အဆုတ်သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်မှာ သွေးဖိအားများနေကြောင်းကို ရောဂါလက္ခဏာတွေအရသော်လည်းကောင်း၊echo ရိုက်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း သိရှိရတယ်ဆိုရင် ကလေးငယ်ကို အောက်ဆီဂျင် ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက် INOmax (Nitric Oxide) ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ အခြားသော အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအထောက်အပံ့တွေကိုသာမက သင့်လျော်သော အခြားဆေးတွေကိုလည်း တွဲဖက်သုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်။
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
INOmax (Nitric Oxide) ကို ကလေးရဲ့ ပါးစပ် သို့မဟုတ် နှာခေါင်းကတဆင့် အဆုတ်ထဲထိရောက်အောင် ရှုသွင်းရပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ ဒီလိုမျိုး ကုသမှုကို ခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ကလေးဟာ ventilator နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ အသက်ရှုပိုက်ကိုလည်း ရှုရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ventilator ဆိုတာဟာ သင့်ကလေးရဲ့ အဆုတ်ထဲကို လေဝင်အောင်၊အဆုတ်ထဲက လေပြန်ထွက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး သင့်ကလေးအသက်ရှုရပိုမိုလွယ်ကူကာ လုံလောက်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ရစေဖို့ ကူညီပေးတဲ့ စက်ပစ္စည်းတမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။INOmax (Nitric Oxide) ကို ၁၄ရက်လောက်အထိ ပေးထားရပါတယ်။INOmax (Nitric Oxide) ကို ချက်ချင်းမရပ်ဘဲ ပမာဏတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့သွားပြီးမှ နောက်ဆုံးလုံးဝရပ်လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။INOmax (Nitric Oxide) နဲ့ ကုသနေစဉ်တလျှောက်လုံးမှာ သင့်ကလေးရဲ့ အသက်ရှုနှုန်း၊သွေးပေါင်ချိန်၊အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ နဲ့ အခြားသော အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို နီးကပ်စွာ စောင့်ကြည့်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
၂၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှာ ဆေးကို သိုလှောင်ရမှာဖြစ်ပြီး ၁၅ – ၃၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကြားထဲမှာလည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
ဂက်စ်အိုးတွေကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂက်စ်အိုးတွေကို လျှပ်စစ်ဒါဏ်၊ပြုတ်ကျခြင်း၊မီးလောင်လွယ်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း၊အစိုဓါတ်များတဲ့ နေရာမှာထားခြင်း၊အပူချိန်များတဲ့ နေရာတွေမှာ ထားခြင်းတို့ကို ရှောင်ကျဉ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်ကလေးအနေနဲ့ မွေးကင်းစကလေးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ တက်ရောက်ကုသမှုခံနေရစဉ်တလျှောက်လုံးမှာ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ နှလုံးရဲ့ ညာဖက်အခန်းကနေ ဘယ်ဖက်အခန်းဆီကို သွေးလွှဲပို့နေရတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေမှာတော့ INOmax (Nitric Oxide) ကို လုံးဝအသုံးမပြုရပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
INOmax ဟာ တိရ စ္ဆာန်တွေရဲ့ မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်မှု မပြုလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် INOmax ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာ သန္ဓေသားကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိ မသိရပါဘူး။INOmax ကို အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ အသုံးမပြုရပါဘူး။ ဒီဆေးကို နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ သုံးစွဲရင် ကလေးငယ်ကို ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိ မသိရပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ INOmax ကို အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ချိန်ဆပြီး သုံးစွဲရပါမယ်။
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သူနာပြုကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရပါမယ်။ အဖြစ်များတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက
မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊သတိလစ်ခြင်း၊လှဲနေရာ သို့မဟုတ် ထိုင်နေရာမှ ထလျှင် မေ့လဲမယောင် ဖြစ်ခြင်း။
(မူမမှန်စွာ) ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊အားနည်းခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို အတိအကျမသိရတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့
ရင်ဘတ်ထဲ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ခြင်း။
အသက်ရှုရခက်ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အထူးတလည် ကုသမှုပေးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ ဆေး သဟဇာတဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေကို ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်မလာအောင် ဒါမှမဟုတ် အနည်းငယ်ပဲ ပေါ်ပေါက်အောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်က ကြိုတင်ညွှန်ကြားထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကာလကြာမြင့်စွာ ဆက်လက်ရှိနေတာ ဒါမှမဟုတ် အခြေအနေပိုဆိုးလာတာမျိုး ဖြစ်လာရင် ဒါမှမဟုတ် သင့်အနေနဲ့ မရှင်းလင်းတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးမေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ပွားနှုန်းကို အတိအကျ မသိရပါဘူး။
အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် INOmax ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ INOmax ကို အသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်သုံးစွဲနေတဲ့ အခြားဆေးတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးများသည် INOmax ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
INOmax (Nitric Oxide) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
INOmax (Nitric Oxide) ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
အဆုတ် သို့မဟုတ် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိခြင်း : အဆိုပါ အခြေအနေတွေဟာ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေတဲ့အတွက် သတိထားပြီး အသုံးပြုရပါမယ်။
နှလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (ဥပမာ နှလုံးရဲ့ ညာဖက်အခန်းမှ ဘယ်ဖက်အခန်းသို့ သွေးစီးဆင်းမှုရှိနေခြင်း) : ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ ဆေးကို မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ INOmax (Nitric Oxide) ကို အသုံးပြုလေ့ မရှိပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နေ့စေ့လစေ့မွေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ နေ့စေ့လစေ့လုနီးနီးမှာ မွေးပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိတဲ့ ကလေးများအတွက်
သတ်မှတ်ထားတဲ့ INOmax ပမာဏကတော့ 20 ppm ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုကို ရက်ပေါင်း၁၄ရက် ဒါမှမဟုတ် အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်ခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးပြီး ကလေးငယ်အနေနဲ့ INOmax မလိုအပ်တော့တဲ့ အချိန်ထိ ဆက်လက်ပေးထားရပါမယ်။20 ppm ထက်များတဲ့ ပမာဏကိုတော့ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Inomax (Nitric Oxide) (အင်နိုမက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
INOmax (Nitric Oxide) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
INOmax ဓါတ်ငွေ့ကို 800 ppm ပြင်းအားနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
nitric oxide ကို အထူးကြပ်မတ်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာပဲ ပေးလေ့ရှိတဲ့အတွက် ဆေးလွန်တာမျိုးတော့ အင်မတန် ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် nitric oxide ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာလည်း အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့အထိတော့ ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။INOmax ဆေးပမာဏလွန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ရင် methemoglobin ပမာဏတက်လာမှာဖြစ်ပြီး ရှုသွင်းလိုက်တဲ့ NO2 ဓါတ်ငွေ့တွေကြောင့် အဆုတ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။NO2 ပမာဏများပြားလာခြင်းဟာ အဆုတ်ကို အလျင်အမြန် ထိခိုက်စေနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။methemoglobin များပြားခြင်းကတော့ သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ကို နည်းပါးစေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ NO2 ပမာဏက3ppm ထက်များလာရင် ဒါမှမဟုတ် methemoglobin ပမာဏက ၇% ထက်များလာရင် INOmax ပမာဏကို လျှော့ချခြင်း ဒါမှမဟုတ် လုံးဝရပ်လိုက်ခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အထိ သွေးတွင်းမှာ methemoglobin ပမာဏ လျော့ကျသွားခြင်း မရှိသေးဖူးဆိုရင်တော့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဗီတာမင်စီ ဒါမှမဟုတ် methylene blue ကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ်သွင်းခြင်း၊သွေးသွင်းခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
nitric oxide ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေက ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးသုံးစွဲဖို့ မေ့သွားတယ်၊လွတ်သွားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 11, 2018
Nitric oxide (inhalation gas). http://www.emedicinehealth.com/drug-
nitric_oxide_inhalation_gas/page2_em.htm. Accessed October 18, 2016.
INOmax (Nitric Oxide). https://www.drugs.com/pro/inomax.html. Accessed
Nitric oxide (inhalation gas). https://www.drugs.com/mtm/nitric-oxide- inhalation-
gas.html. Accessed October 18, 2016.
INOmax (Nitric Oxide). http://www.rxlist.com/inomax-drug/indications-
dosage.htm. Accessed October 18, 2016.
Nitric oxide (Inhalation route). https://www.drugs.com/cons/nitric-oxide-
inhalation.html. Accessed October 18, 2016.